योग किन यति लोकप्रिय भइरहेको छ अनि सुखी र समृद्ध जीवनको लागि एकमात्र उपाय बनेको योग यति लामो समयसम्म कसरी टिकिरहेको छ भन्ने विषयमा सद्‌गुरु चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ ।
Sadhguru: योग लोकप्रिय हुँदै जानुमा थुप्रै कारणहरू छन् । एउटा कुरा त यसले तपाईंलाई आफूबारे केही मूलभूत तथ्यहरूको बोध गराउँछ । तपाईंको शरीर एउटा ब्यारोमिटर (मापन गर्ने यन्त्र) जस्तै हो । यदि तपाईंले यसलाई हेर्ने तरिका जान्नुभयो भने, त्यसले तपाईंलाई आफ्नो बारेमा सबैथोक बताउनेछ । तपाईंले आफ्नो बारेमा सोच्ने काल्पनिक कुराहरू होइन, बरु ती कुराहरू जुन तपाईंको बारेमा सत्य हुन् । तपाईंको मन असाध्यै जाली हुन्छ । यसले हरेक दिन तपाईंलाई आफ्नो बारेमा फरक–फरक कुराहरू भनिरहन्छ । यदि तपाईंले आफ्नो शरीरलाई कसरी पढ्ने भनेर जान्नुभयो भने, यसले तपाईंलाई सबैथोक बताउनेछ, जस्तो ती वास्तवमा छन्— यहाँसम्म कि तपाईंको विगत, वर्तमान र भविष्य नै ! यसैकारण, मूलभूत योग शरीरबाटै शुरु हुन्छ ।
योग एकमात्र यस्तो प्रणाली हो, जुन १५००० वर्षभन्दा बढी समयसम्म कुनै धर्मगुरुको आश्रयबिना वा कसैद्वारा बलपूर्वक लागू नगरिकनै जीवित रहेको छ, टिकिरहेको छ ।
बदलिँदो फेशनअनुरूप थुप्रै कुराहरू आउँछन् र जान्छन् । तर, योग हजारौँ वर्षदेखि जीवित रहेको छ अनि यसले आज पनि गति लिइरहेको छ । भलै, यसलाई एकदमै मौलिक रूपमा सञ्चार गरिने भएपनि, वा यहाँसम्म कि कैयौँ पटक विकृत रूपमा सिकाइने भए तापनि, यो अझै टिकिरहेको छ । योग एकमात्र यस्तो प्रणाली हो, जुन १५००० वर्षभन्दा बढी समयसम्म कुनै धर्मगुरुको आश्रयबिना वा कसैद्वारा बलपूर्वक लागू नगरिकनै जीवित रहेको छ, टिकिरहेको छ । मानवताको इतिहासमा यस्तो कहीँकतै भएको छैन, जहाँ कसैको घाँटीमा तरबार राखेर 'जसरी पनि योग गर्नैपर्छ ' भनिएको होस् । यो अझैसम्म जीवित रहनुको कारण के हो भने, योगले मानव-कल्याणको निम्ति एउटा प्रक्रियाको रूपमा काम गरेको छ, जुन अरू कुनै पनि चीजले गरेका छैनन् ।
संसारमा जसैजसै बुद्धिको गतिविधि प्रबल हुँदै जान्छ, केही समयको अवधिमा थुप्रै मानिसहरूले योगलाई आत्मसात गर्नेछन्— सुखी र समृद्ध जीवनको निम्ति सबैभन्दा लोकप्रिय माध्यम नै योग बन्नेछ ।
यसको लोकप्रियता बढ्नुको अर्को कारण भनेको शिक्षण वा पठनपाठनको स्तरमा भएको वृद्धि हो । पहिलेको तुलनामा हेर्ने हो भने, अहिले बढी मानिसहरूले सोचविचार गर्न थालेका छन् । जब मानिसहरूको बुद्धिमत्ता प्रबल हुँदै जान्छ, उनीहरू हरेक चीजको लागि तार्किक समाधानहरू खोज्ने गर्छन् । उनीहरू जति बढी तार्किक हुन्छन्, त्यति नै बढी विज्ञानमा निर्भर हुन्छन्, तर अहिले विज्ञानको नतिजा केवल प्रविधिमा सीमित भएको छ । संसारमा जसैजसै बुद्धिको गतिविधि प्रबल हुँदै जान्छ, केही समयको अवधिमा थुप्रै मानिसहरूले योगलाई आत्मसात गर्नेछन्— सुखी र समृद्ध जीवनको निम्ति सबैभन्दा लोकप्रिय माध्यम नै योग बन्नेछ ।
योग— व्यायाम होइन !
पश्चिमी जगतमा योग प्रवेश गरेको २० बर्षपछि अहिले यो लोकप्रिय हुँदै गएको छ, अनि अहिले चिकित्सकहरू अघि सरेर यसमा अध्ययन गरिरहेका छन् साथै यो भनिरहेका छन् कि "योग गर्नुमा थुप्रै फाइदाहरू छन् ।" योगलाई बकम्फुसे तरिकाहरूले सिकाइने गरिएको भएपनि, पूरै संसारमा यसबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी जे–जति फाइदाहरू भएका छन्, त्यसलाई कसैले पनि नकार्न सक्दैनन् । तर, यदि योगलाई गलत ढङ्गले एवं विकृति तरिकाले सिकाइने क्रम चलिरह्यो र फैलिँदै गयो भने, १०-१५ वर्षको समयमा तपाईंलाई वैज्ञानिक अध्ययनहरूले कुन–कुन कारणहरूले गर्दा योग गर्नु हानिकारक छ भनेर स्पष्ट रूपमा बताउनेछन्, अनि यसैबाट योगको पतन हुनेछ ।
यदि तपाईं यो भौतिक शरीरलाई पढ्न, बुझ्नको लागि इच्छुक र तत्पर हुने हो भने, सबैथोक जान्नुहुनेछ— किनकि, यो पूरै ब्रह्माण्ड शून्यताबाट अहिलेको अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा यही शरीरमा लेखिएको हुन्छ ।
योगलाई निकै सूक्ष्म तरिकाले ध्यानपूर्वक गरिनुपर्छ, जथाभावी बल प्रयोग गरेर जबर्जस्ती मांसपेशीमा गाँठागुँठी बनाउनको लागि होइन, किनकि यो कुनै व्यायाम होइन । हाम्रो भौतिक शरीरमा पूरै यादहरू वा स्मृतिको संरचना हुन्छ । यदि तपाईं यो भौतिक शरीरलाई पढ्न, बुझ्नको लागि इच्छुक र तत्पर हुने हो भने, सबैथोक जान्नुहुनेछ— किनकि, यो पूरै ब्रह्माण्ड शून्यताबाट अहिलेको अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा यही शरीरमा लेखिएको हुन्छ । योग यस्तो प्रक्रिया हो, जसले ती सम्पूर्ण स्मरणहरू खोल्दछ, अनि यो जीवनलाई यसको चरम सम्भावनातर्फ डोहोऱ्याउँछ । वास्तवमा, योग अत्यन्तै सूक्ष्म र वैज्ञानिक प्रक्रिया हो ।